Barcelona oo ka baxday xiisaha loo qabo saxiixa Bale. - Caasimada Online
Home Warar Barcelona oo ka baxday xiisaha loo qabo saxiixa Bale.
Barcelona oo ka baxday xiisaha loo qabo saxiixa Bale.
Barcelona ayaa isku diyaarineysa inay ka baxdo dalbashada xidiga kooxda Tottenham Gareth Bale, taas micnaheeda ayaana ah inay guul darro kala kulanto Real Madrid oo aad u dooneysa iyana ninka reer Wales.
Labada koox ee xafiiltama ayuu Bale diirada u saarnaa ilaa muddo sanad ah waxayna labadoodu qorsheynayeen inay dalab u diraan dhamaadka xilli ciyaareedkaan xidiga Tottenham.
Laakiin Barca wey ka weecatay iyadoo uga tanaasuleysa dhinaca mushaarka, taas ayaana faa’iido u ah kooxda dhaqaalaha badan ee Real, kuwaas oo doonaya inay 40 milyan oo ginni ku dalbadaan Bale looguna daro mushaar 150 kun oo ginni ah isbuucii, Bale ayaana waqti uu kula midoobo u heysta xidigii ay isku kooxda ahaan jireen Luka Modric kaasoo haatan u ciyaara Los Blancos.
Wargeyska Sunday Mirror, ayaa bishii September daaha ka qaaday in Real Madrid ay kalsooni ku qabto inay hantiso Bale ka dib markii ay xiriir Sport oo qeyb ka ahaa heshiiskii Modric la galeen Tottenham.